शरीरलाई रोग लाग्न नदिने भिटामिन ‘सी’, कुन खानेकुरामा पाइन्छ ? – SabKura Samachar
शरीरलाई रोग लाग्न नदिने भिटामिन ‘सी’, कुन खानेकुरामा पाइन्छ ?
कोरोना भाइरस होस् वा अन्य कुनै भाइरस भिटामिन सीले हाम्रो शरीरको प्रप्रतिरोधात्मक क्षमता बढाई भाइरस माथि विजय प्राप्त गर्न सक्छ।
शरीरलाई स्वास्थ्य राख्नको लागि भिटामिन सीको आवश्यक पर्छ । शरीरमा भिटामिन सीको कमी भएमा रुघाखोकीको सम्भावना बढ्छ । यसको कमीकै कारण अनुहार असामान्य रुपले चाउरी पर्नुका साथै कपाल झर्ने गर्छ । भिटामिन ‘सि’ले शरीरमा रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनुका साथै गिजालाई स्वस्थ राख्न र शरीरलाई उर्जा दिन भिटामिन सीको महत्वपूर्ण भूमिका रहन्छ । त्यसले हामीले दैनिक खाने खानामा भिटामिन सीको मात्रा हुनुपनर्छ । हामीलाई कैयौँ त्यस्ता तरकारीहरु फलफूलहरु कुनमा के पाइन्छ भन्ने थाहा नै छैन। आज हामी तपाईंलाई भिटामिन सी पाइने खानेकुराको विषयमा जानकारी दिनेछौं। प्रस्तुत छ, केही मुख्य भिटामिन सी पाइने तरकारी तथा फलफूलहरु र तिनको फाइदाहरु :
यो प्रोटिन, भिटामिन, मिनरल्स तथा फाइबरको स्रोत हो । आर्युवेदिक हिसाबले पनि अम्बा फाइदाजक छ । अम्बामा भरपूर मात्रामा भिटामिन सि पाइन्छ , जुन शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउनमा निकै लाभदायक मानिन्छ । अम्बामा कालो मरिच तथा नुन मिसाएर खानाले कफको समस्या हट्छ । त्यस्तै, पाकेको अम्बा खाएपश्चात्त मनतातो पानीको सेवनले ज्वरोबाट छुटकारा पाइन्छ ।
रातो भेडे खुर्सानी
चिकित्सकहरुका अनुसार रातो भेडे खुर्सानी खुर्सानीले धेरै भिटामिन सी प्रदान गर्नेगर्छ । यसले शरीरको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउन समेत मद्दत गर्दछ ।
हरियो काउलीमा भिटामिन सी धेरै हुन्छ । जसले हाम्रो शरीरलाई स्वास्थ्य राख्छ । ब्रोकाउली भिटामिन र खनिजको साथ एकदमै स्वास्थ्यबद्र्धक खानेकुरा खान सकिन्छ । भिटामिन ए, सी, र ई का साथै धेरै एन्टिआक्सिडेन्टहरूको मात्रा समेत यसमा पाइन्छ । फाइबरले भरिएको ब्रोकाउली हामीले खाने तरकारीहरुमध्ये सबैभन्दा धेरै स्वस्थ्यकर खाना समेत हुनसक्छ । यसले शरीरको शक्तिलाई अक्षुण्ण राख्नको लागि मुख्य भूमिका खेल्ने गर्छ । यो जतिसक्दो थोरै पकाउनु नै राम्रो मानिन्छ ।
भिटामिन ‘सी’ प्रशस्त पाइने सुन्तलामा क्याल्सियम र फाइबर पनि प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। सुन्तलाको नियमित सेवनले शरीरलाई स्वास्थ्य बनाउँछ ।
अमलामा प्रशस्त मात्रामा भिटामिन सी पाइन्छ । एउटा अमलामा ४ वटा निबूवामा हुने भिटामिन पाइन्छ । अमलाको नियमित सेवनले पाचन प्रणालीलाई स्वस्थ्य राख्छ ।
भिटामिन सीको अर्को भण्डार स्ट्रबेरी हो । यसको प्रयोग स्वास्थ्यका लागि फाइदाजन छ ।
मेवामा भिटामिन सी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । मेवा खाँदा पाचन प्रणाली राम्रो बन्नुका साथै हाम्रो शरीरको छालालाई पनि चम्किलो बनाउँछ ।
भुईकटर भिटामिन सीको स्रोत भण्डार हो । यसको प्रयोगले शरीरलाई स्वास्थ्य राख्छ ।
सिट्रस फलफुलहरु भन्नाले सुन्तला, अंगुर, कागती, निबुवा, आदि जस्ता फलफुलहरुलाई बुझाउँछ। यो हाम्रो खानेकुरामा नभई नहुनेमध्येको खाना हो । यस्ता फलफुलहरु हामीलाई लामो समयदेखि पोषणविद्का साथै हाम्रा हजुरआमाले पनि खान सुझाउनुहुन्छ। यसमा पाइने भिटामिन सीले शरीरको विषादी फाल्ने र घाउ, चोटपटक तथा संक्रमणबाट जोगाउने काम गर्दछ । यसबाहेक यी फलफुलहरुमा फाइबर, पोटासियम, क्यालसियम, थाएमिन, भिटामिन बि सिक्स, फोसफरस, म्यागनेसियम, कपर, आदिजस्ता तत्वहरु पनि पाइन्छन् । सिट्रस फलफुलहरुमा भएका तत्वहरुले क्यान्सर, मुटु तथा नशासम्बन्धि रोगविरुद्ध लड्न सहयोग गर्दछ ।
हरियो भटमासलाई विशेष गरी एसियाली मुलुकहरुमा अत्यधिक रुचाइन्छ । उसिनेर, तरकारी पकाएर, सुप बनाएर वा टुसा उमारेर पनि खान सकिने हरियो भटमासलाई धेरै तरिकाले पकाएर खाने चलन छ । भटमासमा भिटामिन सी र आइसोफ्ल्याभोन नामक तत्व पाइन्छ जसले घाउ वा चोटपटक, शरीरमा पाइने विषादी, क्यान्सर तथा अन्य जिवाणुविरुद्ध लड्न मद्दत गर्दछ । यसले शरीरमा चोटपटक लाग्न वा सुन्निन दिँदैन, कोषहरुको उमेर लम्ब्याउने र क्यान्सरविरुद्ध लड्न पनि सहयोग गर्दछ । अनुसन्धानका अनुसार जीवनभर भटमासलाई हामीले खाने खानेकुराको अंश बनाउन सके स्तन क्यान्सरको जोखिमबाट पनि बच्न सकिन्छ ।
हेर्दा पनिरैजस्तो देखिने भटमासबाट बनेको तोफुले हाम्रो शरीरलाई एकदम नै फाइदा गर्दछ । भटमासमा पाइने तत्व नै यसमा पनि पाइने भएकाले यो पनि स्वास्थ्यवद्र्धक छ । एसियाली मुलुकहरुमा प्रचलित तोफुलाई तेलमा फु¥याएर, उमालेर वा यसै पकाएर पनि खान सकिन्छ । भटमासबाटै बन्ने भएकाले यसमा पनि भिटामिन सी र आइसोफ्ल्याभोन प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ। यसका साथै यसमा प्रोटिन, क्यालसियम, आइरन, सेलेनियम, फोस्फोरस, म्याग्नेसियम, जिंक, कप्पर र हाम्रो हड्डी र दाँत बलियो र स्वस्थ बनाउन चाहिने खनिज पनि पाइन्छ । केही पोषणविद्हरुका अनुसार तोफु खाएपछि लामो समयसम्म टन्न भएको महसुस गराउने भएकाले धेरै खाने बानी भएकाहरुले तोफु खादाँ खाना कम गर्न सक्ने बताउँछन् ।
गाजरमा भिटामिन सी पाउनुको साथै गाजरमा हुने बेटा क्यारोटिनले यो सुन्तला रंगको हुन्छ । यो तत्वलाई हाम्रो शरीरले भिटामिन ए मा बदल्छ । न्यासनल इन्स्टिच्यूट अफ हेल्थका अनुसार हाम्रो शरीरले भिटामिन ए उत्पादन गर्न सक्दैन, त्यसैले हामीले खाने खानेकुराबाट नै शरीरले भिटामिन ए प्राप्त गर्दछ । बेटा क्यारोटिनले रोगसँग लड्न सक्ने क्षमता, दृष्टि, प्रजनन तथा कोषिय सञ्चारको अभिवृद्धि गर्दछ । यही तत्वले नै शरीरको विषादी हटाउँदै कोषलाई जीवित रहन र यौनावस्था वृद्धि गर्न मद्दत गर्दछ । बढ्दो उमेरका कारण गुम्दै जाने दृष्टिको रक्षा गर्न पनि यसले सहयोग गर्दछ । गाजरलाई सकेसम्म काँचो खाँदा नै यसले बढी फाइदा गर्छ तर यसको पोषण खेर नजाने गरी पकाएर खाँदा पनि यो फाइदाजनक नै हुन्छ ।
रायोको साग नेपाली भान्छामा प्रायः सबैले प्रयोग गर्ने तरकारी मध्येको एक हो । यस सागमा हाम्रो शरीरलाई अत्यावश्यक खनिज पदार्थ जस्तै फलाम, पोटासियम, क्याल्सियम जिन्क, भिटामिन ए, के, सी प्रशस्त मात्रामा पाइन्छ । रायोको साग नियमित खानाले हड्डी खिइने, रक्त अल्पता, मुटुरोग, प्रोस्टेट क्यान्सर इत्यादि रोगहरूबाट बचाउँछ ।
तोरीको साग सबैलाई मनपर्ने तरकारी हो । यसको प्रयोगले पाचन प्रणाली मुटु, मस्तिष्कलाई स्वस्थ राख्दछ । यसमा खनिज, फाइबर, भिटामिन के, ए, सी, ई र फोलेट पाइन्छ । एन्टीअक्सिडेन्ट र एन्टीइन्पलामेन्टरी पाइने हुनाले यसले पिसाब थैली, ठुलो आन्द्रा, फोक्सो र डिम्बाशयको क्यान्सर हुनबाट बचाउँछ ।
बेथेको सागलाई स्वास्थको लागि निकै उपयोगी मानिन्छ । यसमा विभिन्न किसिमका पोषक पदार्थहरू जस्तै रेशा, भिटामिन ए, सी र खनिजहरू जस्तै क्याल्सियम, फलाम, पोटासियम, फोस्फोस्रस, म्याग्नेसियम र जिङ्क पाइन्छ । बेथेको सागको प्रयोग गर्नाले कब्जियत, पाइल्स, स्कर्बी, रक्तअल्पता, जुका, मृगौलाको पत्थर, मुखको अल्सर, स्वास गन्हाउने समस्या हटाउन मद्दत गर्दछ । मस्तिष्क र शरीरलाई स्वस्थ राख्छ । रगत सफा गर्छ । यस्तो बहुगुणी बेथेको सागलाई नियमित रुपमा प्रयोग गर्न सके विभिन्न खतरनाक रोगहरूबाट बच्न सकिन्छ ।
कर्कलो वर्षायाममा पाइने तरकारी हो । यसमा प्रशस्त मात्रामा फाइबर, भिटामिन ए, सी, इ र फोलेट पाइन्छ । कर्कलो एन्टिअक्सीडेन्टको राम्रो स्रोत हो । कर्कलोले रोग प्रतिरोधात्मक शतिm बढाउँछ । कोलोस्टेरोल नियन्त्रण गर्दछ । आँखा, छाला, गर्भाअवस्थामा भु्रणलाई स्वस्थ राख्छ । रक्तअल्पता कम गर्न सहयोग गर्दछ । परम्परागत रुपमा पनि कर्कलोलाई औषधीको रुपमा प्रयोग गर्दैआएको पाइन्छ । कर्कलोको डाँठलाई सुकाएर राखिन्छ र आउँ पर्दा यसलाई पकाएर खाँदा आउँ रोग निको हुन्छ भनी बुढापाकाहरू बताउँछन् ।
पालकले पनि भिटामिन सी प्राप्त गर्नको लागि अति उपयोगी तरकारी हो । यसमा धेरै एन्टिआक्सिडेन्टहरू र बिटा क्यारोटीनले भरिएको हुन्छ । जसले हाम्रो प्रतिरक्षा प्रणालीको क्षमतालाई बढाउन सक्छ । ब्रोकाउली र यसलाई सकेसम्म थोरै पकाइन्छ । ताकि यसमा रहेका पोषक तत्वहरुमा कमी नआओस् ।
यो सागलाई काँचै खाने गरिन्छ । त्यसैले यसलाई सलाद साग भनिन्छ । यसलाई अङ्गे्रजीमा Lettuce भनिन्छ । यसलाई भिटामिन के, ए, सी र पोटासियमको राम्रो स्रोत मानिन्छ । सलाद सागले मधुमेह, क्यान्सर, हृदयरोग, अनिद्रा, ग्यास्टिक हुनबाट बचाउँछ । रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउँछ, मेटाबोलिज्म राम्रो बनाउँछ ।
बन्दा, गोभी जस्ता तरकारीहरु